७ सरल योग आसन: जसले गर्धनको दुखाईबाट मुक्ति दिन्छ | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home स्वास्थ्य ७ सरल योग आसन: जसले गर्धनको दुखाईबाट मुक्ति दिन्छ
मानिस जुन ढंगले विकास र प्रगतिको दौडमा लागेको छ, त्यही अनुपातमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या थपिँदै गएका छन् । मान्छेको उन्नतिमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बाधक बनेका छन् । खासगरी मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक रूपमा मान्छेलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
मानिस काम गर्ने बेला यति तनावमा हुन्छन् कि आफैंलाई एउटा कारखानामा परिणत गर्न पुग्छन् । जसले गर्दा मानिसका विभिन्न अंग टुटफुट हुन्छ । एउटा अति सामान्य रोग हो गर्धनका दुखाई तर यसले पूरै शरीरलाई प्रभावित पार्छ । धेरैजसो समय एउटै आसनमा बस्नु, पूरै रात नसुत्नु तथा व्यायाम नगर्दा गर्धनको रोग लाग्छ । गर्धन दुख्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन सात प्रकारका योगासन छन् । जसलाई अनुशरण गर्दा मानिसको दैनिक जीवनलाई कुनै असर पु¥याउँदैन ।
यस्ता छन् योगासन:
१. बाल आसन वा शिशु आसन
सबैभन्दा पहिले घुँडा भुइँमा टेकेर बस्नुस् । दुई हात जमिनमा मिलाएर राख्नुहोस् । त्यसपछि लामो सास तान्नु होस् । अनि कम्मरलाई झुकाउँदै शरीरलाई दुई खुट्टाको अगाडि लैजानुस् । त्यसपछि टाउकोलाई विस्तारै जमिनमा राख्नुहोस् । आफ्नो दुई हातलाई शरीरको दुईतर्फ जमिनमा राख्नुहोस् । यो आसनमा जति धेरै समय हुन्छ, विश्राम लिनुहोस् । त्यसपछि एकपटक सास तानेर विस्तारै विस्तारै माथि उठाउनुहोस् । आफ्नो हात आकाशतर्फ देखाउँदै फर्काएर कम्मरमा राख्नुहोस् । यसो गर्दा गर्धन दुःखाई कम मात्र होइन, मनमा शान्ति पनि मिल्छ ।
२. नटराज आसन वा रिक्लाइनिंग द्विस्टस
आफ्नो शरीर सीधा पारेर जमिनमा सुत्नुहोस् । विस्तारै दायाँ खुट्टा उठाएर बायाँको माथि लैजानुस् । दायाँ खुट्टा सिधा नै राख्नुहोस् । दायाँ खुट्टा जमिनमा एउटा सिधा कोण बनाउनुहोस् । आफ्नो दुईवटै हात शरीरको दायाँ बायाँ फैलाउनुहोस् । अनुहारलाई दायाँतर्फ मोड्नुस् । अलि लामो सास तान्नुहोस् । केही सेकेन्ड त्यही मुद्रामा बस्नुहोस् । अब बायाँ खुट्टाले पनि दायाँले गरेको जस्तै अभ्यास दोहो¥याउनुहोस् । यसले तपाईको मासंपेशीलाई लचिलो बनाउँछ । यो महादेवको नृत्यको मुद्रा हो । यसले तपाईलाई निकै आनन्द महसुस गराउँछ ।
३. बितिली आसन वा गाई मुद्रा
आफ्नो पिडौलालाई जमिनमा राख्नुहोस् । बाँकी शरीरलाई टेबल टप मुद्रामा राख्नुहोस् । आफ्नो जाँघ, शरीर र हातको सहायताले बस्नुहोस् । आफ्नो घुँडा, कम्मर, कुहिना र काँधको एकै लाइनमा जमिनमा सटाएर राख्नुहोस् । शरीरलाई जमिनको समानान्तरमा राखेर सास लिनुहोस् र जमिनतर्फ खिच्नुहोस् । टाउकोलाई माथितर्फ उठाउनुहोस् । यही मुद्रामा केही समय बस्नुस् । तपाईलाई आराम दिलाउँछ ।
४. मार्जरी आसन वा बिरालो मुद्रा
बेला बेला सास छाडेर घाँटीको हड्डीलाई गोलो बनाउनुहोस् र टाउको तल लैजानुहोस् । विस्तारै अनुहार गर्धनतिर लैजानुहोस् । अब यही मुद्रामा रहेर सास लिने र तान्ने क्रिया गरिरहनुस् । यसो गर्दा तपाईको मेरुदण्ड र पेटको हल्का मसाज हुन जान्छ । साथै, गर्धन दुखाई पनि ठिक हुन्छ ।
५. विपरीत कर्णी आसन वा पर्खालको सहारा खुट्टा माथि गर्ने मुद्रा
यो आसन निकै सरल छ । आफ्नो पिठ्युँलाई सुताउनुहोस् र भित्ताको सहारामा खुट्टा माथि उठाउनुहोस् । आफ्नो दुवै हात जमिनमा फैलाउनुहोस् । यो आसनमा रहेर कम्तीमा पनि १५ पटक गहिरो सास लिँदै छाड्दै गर्नुहोस् । यसबाट तपाईको गर्धनकमो पछाडिको भागलाई हल्का मालिस हुन्छ । अलि अलि पिठ्युँ दुःखेको छ भने निको हुन्छ ।
६. उत्थिता त्रिकोण आसन वा एक्सटेन्डेट ट्राइऐंगल मुद्रा
सिधा उभिनुहोस् । आफ्नो खुट्टालाई जति सक्नु हुन्छ फैलाउनुहोस् । शरीरलाई सिधा राख्दै दुवै हात फैलाएर राख्नुहोस् । सास तान्दै दायाँतर्फ झुक्नुहोस् । दायाँ हातले घुँडामा स्पर्श गर्नुहोस् र बायाँ हात माथि लैजानुहोस् । यो मुद्रामा रहँदा बायाँ हाततिर हेर्नुहोस् । यो मुद्रामा जति समय सक्नु हुन्छ बस्नुहोस् । यसबाट तपाईको गर्धन दुखाई निकै कम हुन्छ ।
७. शव आसन
जमिनमा सिधा भएर सुत्नुहोस् । हातलाई शरीरको दुवैतिर राख्नुहोस् । दुवै खुट्टा विस्तारै खोल्नुहोस् । हातलाई आकाशतर्फ फर्काउनुहोस् । सबै आसन सकेपछि शव आसन गरिन्छ । करिब पाँच मिनेट शव आसनमा बस्दा शरीरमा स्फुर्ति आउँछ ।